काठमाडौँ । अमेरिकामा नयाँ ५ जी सर्भिस विमान चालक र विमान कम्पनीहरुलाई मुश्किलको विषय बनेको छ । विश्वका धेरै देशहरूले अमेरिकाबाट आउने-जाने हजारौं उडान ५ जी सर्भिसका कारण प्रभावित भएका छन् ।
समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार धेरै इंटरनेशनल एयरलाइन्स कम्पनीहरूले बुधबार कैयौं उडान रद्द गरेका छन् । विमान कम्पनीहरूले ५ जी सेवाले विमानको नेभिगेशन सिस्टमलाई असर गर्ने भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका छन् । अमेरिका कयौं एयरपोर्टमा बुधवारबाट ५ जी सेवा शुरु भएपछि विमान कम्पनीहरुले उडान स्थगितको निर्णय लिएका छन् ।
अमेरिकाका १० सबैभन्दा ठूलो एयरलाइंस कम्पनीहरूले ५ जी मोबाइल फोन सेवाहरूले विमानको उडानमा असर गर्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
एयरलाइंस कम्पनीहरुले ५ जी नेटवर्कले विमानको सी-ब्यान्ड के नेभिगेशन सिस्टममा खासगरी खराब मौसमको समयमा बाधा उत्पन्न हुने दाबि गर्दै आएका छन् ।
विमानहरूमा ५ जी प्रविधिको समस्या के हो?
भेरिजोन र एटी एण्ड टी ले संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनवरी १९ मा ५ जी सेवा सुरु गर्‍यो, तर उड्डयन कम्पनीहरूको विरोधलाई ध्यानमा राख्दै, भेरिजोन र एटी एण्ड टी ले एयरपोर्ट वरपर ५ जी सेवाहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
एयर इन्डिया, जापानको एयरलाइन्स र दुबईको इमिरेट्स लगायतका धेरै कम्पनीहरूले बिहीबारदेखि उडान सुचारु गर्दैछन् किनभने विमानस्थलको वरिपरि उच्च गतिको ५ जी नेटवर्कको सुरुवात स्थगित भएको छ । यी कम्पनीहरूले बुधवार ५ जी लन्चलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाका लागि आफ्ना धेरै उडानहरू रद्द गरेका थिए ।
फाइभजीले विमानलाई नोक्सान पुर्याउने कुरा किन भइरहेको छ ?
वास्तवमा, फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएफए), संयुक्त राज्यमा नागरिक उड्डयनलाई नियमन गर्ने एजेन्सी र कम्तिमा १० अमेरिकी उड्डयन कम्पनीहरूले ५ जी सेवाहरूले उडानमा हवाइजहाजहरूको सञ्चालन र सुरक्षालाई असर गर्ने डर छ ।
हावामा विमानहरू ठोक्किने दाबि:
वास्तवमा, यो विश्वास गरिन्छ कि ५ जी सेवाहरूको सुरुवातले विमानहरूको उचाइ मापन गर्ने अल्टिमिटरलाई असर गर्नेछ । जसका कारण दुईवटा विमान हावामा ठोक्किने जोखिम रहनेछ । वास्तवमा, जसरी सडकमा रहेका सवारी साधनहरूले बायाँ र दायाँ सरेर ट्राफिक नियन्त्रण गर्छन्, त्यसैगरी हवाई ट्राफिक कन्ट्रोलबाट प्राप्त जानकारी मार्फत हावामा रहेका विमानहरू एकअर्कासँग ठोक्किनबाट बच्न माथि र तल सर्छन् । तर फाइभजीका कारण जमिनबाट उचाइ बताउने अल्टिमिटरको डाटा प्रभावित भएमा उनीहरूले यो जानकारी पाउन सक्ने छैनन्, जसले गर्दा विमान हावामा ठोक्किने जोखिम बढ्नेछ ।
५ जीलाई किन भनिएको छ विमानमा खतरा
५ जी सेवाहरू रेडियो सिग्नलहरूमा आधारित छन् । अमेरिकामा ५ जीको लागि प्रयोग भइरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई सी-ब्यान्ड भनिन्छ ।
वास्तवमा, अमेरिकाले २०२१ मा आफ्ना मोबाइल कम्पनीहरूलाई ५ जीको मध्य-दायरा ब्यान्डविथको फ्रिक्वेन्सी लिलामी गर्यो । एकै समयमा, विमानको अल्टिमिटर रेडियो संकेतहरूले पनि लगभग समान दायराको फ्रिक्वेन्सीहरू प्रयोग गर्दछ ।
५ जीको फ्रिक्वेन्सी र जहाजको अल्टिमिटरको फ्रिक्वेन्सी लगभग एउटै दायरामा भएकाले जहाजको सुरक्षा र यसको यात्रा मार्ग अर्थात नेभिगेसनमा खतरा हुने सम्भावना रहन्छ ।
अल्टिमिटरले विमान जमिनबाट कति उचाइमा उडिरहेको छ भनेर मात्र मापन गर्दैन, तर यसको सुरक्षा र नेभिगेसन प्रणालीको लागि डेटा पनि प्रदान गर्दछ ।
५ जी प्रसारणहरूले विमानको अल्टिमिटर जस्ता उपकरणहरूको उचित कार्यमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ, जसले विमानलाई यसको अवतरणलाई असर गर्ने जोखिममा राख्छ ।
अल्टिमिटर जहाजको उचाइ र स्वचालित अवतरणमा बताउन प्रयोग गरिन्छ ।
अल्टिमिटरको डेटाले हावाको कतरणको चेतावनी दिन पनि काम गर्दछ, त्यो हो, वायुको गति/वा वायुमण्डलमा छोटो दूरीमा दिशामा भिन्नता, जुन जहाजहरूका लागि खतरनाक मानिन्छ ।
अल्टिमिटरको प्रभावले विमानलाई खराब मौसम, बादल वा कुहिरोमा अवतरण र टेक-अफलाई असर गर्ने बेलामा मात्र दृश्य डेटामा भर पर्न बाध्य पार्छ ।
विमानको रेडियो अल्टिमिटर प्रभावित हुँदा, विमानको स्वचालन प्रणाली वा पाइलटले जमिनमा पुग्दा, विशेष गरी जमिनमा पुग्दा सही भविष्यवाणी गर्न नसक्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ ।
विश्वका कति देशले बिना कुनै हानि ५ जी प्रयोग गरिरहेका छन् ?
विमानमा फाइभजी नोक्सानको विषय अमेरिकामा ठूलो समस्या बनेको भए पनि विश्वमा यस्ता धेरै देश छन् जहाँ विमानमा कुनै समस्या नपर्ने गरी ५जीको राम्रो प्रयोग भइरहेको छ ।
युरोपका २७ देशमा उडानमा फाइभजीका कारण कुनै गुनासो नपरेको र युरोपेली उड्डयन निकायले यो समस्या अमेरिकामा मात्रै भएको बताएको छ ।
युरोपेली संघका २७ देशहरूले अमेरिकाको तुलनामा कम फ्रिक्वेन्सी ५ जी नेटवर्कहरू प्रयोग गरिरहेका छन्।
फ्रान्समा विमानको अल्टिमिटरका लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी अमेरिकाले प्रयोग गर्ने अल्टिमिटर फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम छ । साथै, फ्रान्सले अमेरिका भन्दा कम ५ जी पावर स्तर प्रयोग गर्दछ ।
फ्रान्स जस्ता केही देशहरूले एयरपोर्टहरू वरिपरि "बफर जोन" बनाएका छन् जहाँ ५ जी सिग्नलहरू यस्तो समस्याबाट बच्न प्रतिबन्धित छन् । साथै, यहाँ एन्टेना अलिकति तल झुकाइएको छ, ताकि विमानको सिग्नलमा बाधा नहोस् ।
दक्षिण कोरियामा अप्रिल २०१९ देखि फाइभजी सेवा प्रयोग भइरहेको छ तर यसका कारण एयरलाइन्सको रेडियो सिग्नलमा कुनै समस्या आएको छैन ।
दूरसञ्चार उद्योगले विमानमा असर पर्ने सम्भावनालाई खारेज गरेको छ । भेरिजोन र एटी एण्ड टी, अमेरिकामा ५ जी सेवा ल्याएका कम्पनीहरूले कम्तिमा ४० अन्य देशहरूमा ५ जी सेवा सुरु भएको बताएका छन् । यी मध्ये कुनै पनि देशमा एयरलाइन्समा कुनै अवरोध भएको गुनासो आएको छैन ।
यस्तो समस्याबाट बच्नका लागि अमेरिकी टेलिकम कम्पनीहरूले फ्रान्सजस्तै कम्तीमा ५० अमेरिकी एयरपोर्टलाई ६ महिनासम्म बफर गरेका छन् । अमेरिकी दूरसञ्चार कम्पनीहरूले यस्तो समस्याबाट बच्न फ्रान्सजस्तै अमेरिकाका कम्तीमा ५० विमानस्थलमा ६ महिनाका लागि बफर जोन बनाउने सहमति गरेका छन् ।